Muxuu dalkan Afrika ku yaalla isaga xaraashaya maroodigiisa? |
Saameynta ka dhalatay abaaraha iyo dagaalka banii’aadanka uu kula jiro duur joogta ayaa ku khasbay dowladda Namibia inay xaraashto ilaa 170 maroodi oo qiimahoodu sarreeyo.
“Dhibaatada ka dhalatay abaarta iyo tirada maroodiga sare u sii kacayo xilli ay soo badanayaan weerarada banii’aadanka uu ku hayo maroodiga, waxaa soo ifbaxday baahida ah in la yareeyo tiradiisa” ayaa lagu yiri xayeeysiin lagu baahiyay wargeyska ay leedahay dowladda ee New Era.
Wasaaradda deegaanka ayaa ku casuuntay shirkadaha daneynayo arrintani inay raacaan shuruudo gaar ah oo ay kamid tahay xeerka caalamiga ah iyo inay heystaan ogolaansho ah in xayawaanka loo dhoofin karo meesha laga doonayo.
Waxaana loo qabtay cidda daneyneyso maroodiga in codsigooda ay kusoo gudbiyaan ilaa 29-ka bisha Jannaayo.
Sanadkii lasoo dhaafay ayay aheyd markii dowladda Namibia ay fasaxday in la xaraasho 1,000 kamid ah xayawaanada duur joogta cabsi laga qabo darteed inay dhintaan xilli abaaro baahsan saameeyeen isla markaana aysan jirin nabaad ay cunaan.
Waxaana xayawaanadaas kamid ahaa , Maroodiga, Geriga, Gisida iyo deerada, qorshahaas oo looga gollahaa in lagu helo lacag gaareyso 1.1 malyan si deegaanka iyo duurjoogta loogu ilaaliyo.